धार्मिक स्थलमा चर्चित जोडी शा’री’रिक स’म्ब’न्धमा लि’प्त अवस्थामा भेटिए, बयान सुन्दा प्रहरी नै छक्क पर्यो ! – Khabar Hub Media
Khabar Hub Media
A new wp site
धार्मिक स्थलमा चर्चित जोडी शा’री’रिक स’म्ब’न्धमा लि’प्त अवस्थामा भेटिए, बयान सुन्दा प्रहरी नै छक्क पर्यो !
January 19, 2022 admin local news 0
एजेन्सी । ऐतिहासिक स्थलमा एक दम्पती शा’री’रिक स’म्ब’न्ध बनाइराखेको अवस्थामा फेला परेका छन् । थाइल्याण्डमा सार्वजनिक स्थ’ल’मा स’म्ब’न्ध राखेको आरोपमा एक जोडी पक्राउ परेका हुन् । ऐतिहासिक स्मारकमा उनीहरुबीच शा’री’रिक स’म्ब’न्ध भएको थियो ।
यसै क्रममा केहीले भिडियो बनाए । त्यसपछि प्रहरीले दम्पतीलाई पक्राउ गरेको थियो । डेली स्टारको रिपोर्ट अनुसार यो घटना थाइल्याण्डको चियाङ माई प्रान्तको हो । जहाँ ऐतिहासिक स्थलमा एक जोडी सम्बन्धमा देखिएका थिए ।
घटनाको भिडियो स्थानीयले आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरेका थिए । जब यो भिडियो २२ अक्टोबरमा पुलिसको नजरमा आयो, उनीहरूले जोडीलाई खोज्न थाले। केही समय नबित्दै प्रहरीले ४२ वर्षीया सिरानी र उनका ४८ वर्षीय प्रेमी चालरामलाई पक्राउ गरेको थियो ।
दुवैले ऐतिहासिक स्थलमा दिउँसो शा’री’रिक स’म्प’र्क ग’रे’को स्वी’का’र गरेका छन् । दम्पतीले सार्वजनिक स्थानमा शा’री’रिक स’म्प’र्क ग’र्ने पहिल्यै योजना नगरेको बताए । यो अचानक भएको र आफूहरु नियन्त्रण हुन नसकेको बताए ।
जोडीले के भने ?
यस अवस्थामा चालरामले भने, मलाई कसैले हेरिरहेको छैन भन्ने लागेको थियो। हामी पर्खाल पछाडि थियौं। ऐतिहासिक स्मारकको अपमान गर्ने मेरो कुनै मनसाय थिएन। म चियाङमाईका जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु र यो दोहोरिने छैन भन्ने वाचा गर्दछु।
सोही क्रममा प्रहरी अधिकृत कित्तीपोङ फेत्चामुनीले भने– दम्पती विभिन्न शहरका हुन्, सोधपुछका क्रममा उनीहरुले आफ्नो अपराध स्वीकार गर्दै माफी मागेका थिए। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन जिल्ला प्रहरीलाई सुनसान क्षेत्रको निरीक्षण गर्न भनिएको अधिकारीले बताए ।
ခုလေးတင် နေပြည်တော် ဝင်အစီးခံရပြီဟေး